[Zava-dehibe] Momba ny fanidiana tsy maharitra ny efitrano fahatsiarovana an'i Kumagai Tsuneko
Mandehana any amin'ny efitrano fahatsiarovana
Trano Fahatsiarovana an'i Shiro Ozaki
Jereo ny magazine fampahalalana
Raha tsy izany Association
Hisy ny seho mivantana mivantana "Ginbaku Actress sy Modern Girl"!
イ ベ ン ト Efitrano fahatsiarovana an'i Ryuko
Manao fampirantiana sangan'asa "Mifantoka amin'ny sary hosodoko nataon'i Ryuko izay miresaka momba ny rivotra mangatsiaka"
Recruitment Efitrano fahatsiarovana an'i Kumagai Tsuneko
Momba ny fampiharana ny atrikasa momba ny sora-baventy Kana an'i Tsuneko Kumagai "Ny hatsaran'i Kana dia mampitony amin'ny borosy ranomainty"
Recruitment Efitrano fahatsiarovana an'i Ryuko
Lahateny "Fampirantiana sangan'asan'ny Tranombakoka Fahatsiarovana Ryuko" miresaka momba ny "Torolalana fankasitrahana" natao tamin'ny rivotra mangatsiaka.
202206 / 06(Month)
Fandaharana fialan-tsasatra amin'ny fahavaratra ho an'ny ankizy "Andao hijery, hanao sary ary hahita indray an'i Ryuko!"
Andian-dresaka mivantana amin'ny Instagram 2022 #loveartstudioOtA Natao!
Raha tsy izany Efitrano fahatsiarovana an'i Ryuko
Katalaogin'ny fitaovana ao amin'ny fanangonana 1 "Ryuko Kawabata's" South Sea Sketch "" dia noforonina.
Raha tsy izany Efitrano fahatsiarovana an'i Sanno Kusado
Navoaka ny Efitrano Fahatsiarovana Sanno Sodo "Fanamarihana ny Efitrano Fahatsiarovana" (No. 6).
Raha tsy izany Trano Fahatsiarovana an'i Shiro Ozaki
Navoaka ny Efitrano Fahatsiarovana Ozaki Shiro "Fanamarihana ny Efitrano Fahatsiarovana" (No. XNUMX).
Raha tsy izany Efitrano fahatsiarovana an'i Kumagai Tsuneko
Navoaka ny "Memorial Hall Note" (No. 6) ao amin'ny Trano Fahatsiarovana an'i Kumagai Tsuneko (No. XNUMX)
Recruitment Efitrano fahatsiarovana an'i Sanno KusadoTrano Fahatsiarovana an'i Shiro Ozaki
Ireo mpandray anjara tamin'ny lahateny momba ny tranobe faha-4 tao amin'ny Reiwa taona faha-XNUMX
Navoaka ny "Memorial Hall Note" (No. 6) ao amin'ny Efitrano Fahatsiarovana an'i Ryuko.
Avy amin'ny fikambanana Association
Momba ny fipoahan'ny olona tsara coronavirus vaovao an'ny mpiasa notendren'ny Ota Ward Culture Promotion Association
Momba ny fipoahan'ny olona tsara coronavirus vaovao an'ny mpiasan'ny fikambanana fampiroboroboana kolontsaina Ota-ku
Avy amin'ny fotodrafitrasa Aplico
Momba ny famerenana ny fampiasana ny Ota Ward Hall, Aprico Small Hall, Exhibition Room, Studio A noho ny fiafaran'ny asa fanaovana vaksiny.
Avy amin'ny fotodrafitrasa Efitrano fahatsiarovana an'i Kumagai Tsuneko
Avy amin'ny fotodrafitrasa Efitrano fahatsiarovana an'i Ryuko
Momba ny tatitra momba ny valin'ny fanadihadiana ny toetr'andro momba ny rivotra
Momba ny fanakatonana vonjimaika amin'ny 10 Oktobra (Zoma)
イ ベ ン ト Efitrano fahatsiarovana an'i Kumagai Tsuneko
Navoaka ny "Memorial Hall Note" (No. 5) ao amin'ny Trano Fahatsiarovana an'i Kumagai Tsuneko (No. XNUMX)
Momba ilay horonan-tsary fampidirana ny fampirantiana hatsaran-tarehy an'i Kana "Mifantoka amin'ilay poeta antonontany voalohany tia ny vanim-potoana efatra ao Japon"
Momba ny horonan-tsary fampidirana ny fampirantiana faha-30 "Tsuneko Kumagai sy ny Book of Connections"
Tranombakoka virtoaly nosokafana tao amin'ny Ota Ward City Promosi "Unique Ota"
Avy amin'ny fotodrafitrasa Trano Fahatsiarovana an'i Shiro Ozaki
Momba ny fanoloana fitaovana fampirantiana sasany
Andro mihidy isaky ny toerana
Sabotsy 2022 martsa 9
Atiny atoro anao
Tetikasa opera fandraisana anjara mandritra ny telo taona ny paroasy nanomboka tamin'ny taona 2019. Ity dia tetik'asa hivoatra isan-taona ary hanao opéra lava amin'ny taona fahatelo.
Tetikasa iray hanehoana sangan'asa eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe, mampiasa ny gusset of Ota Ward ho tranombakoka zavakanto.Tanjona ny hanokatra ny kanto ho an’ny olona maro ary hamorona tanàna mirindra.
Efa nisy taloha tao amin'ny paroasin'i Ota ny "Tanànan'ny Mpanoratra Magome". Tetikasa mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina ny "Magome Writers' Village Fantasy Theater Festival" izay mampahafantatra ny sanganasan'ny mpanakanto mifandraika amin'ny Ota Ward miaraka amin'ny zavakanto fampisehoana toy ny teatra sy dihy.
Taratasy fampahalalana momba ny kolontsaina any Ota Ward
"ART tantely HIVE"
Ity dia taratasy fampahalalana navoakan'ny Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward izay misy fampahalalana momba ny kolontsaina sy ny zavakanto eo an-toerana.Hivoaka isaky ny telo volana.
Ho an'ny aretina coronavirus vaovao
Initiatives mifandraika amin'ny
Mampihatra ny fepetra fisorohana aretina izahay mba hahafahan'ny tsirairay mampiasa io toerana io amin'ny fiadanan-tsaina.
Fampahafantarana ny faritra Ota Ward
Mampahafantatra tranokala mahasoa amin'ny sehatra samihafa toy ny kolotsaina, zavakanto, fanatanjahantena ary fampahalalana miaina ao amin'ny Ota Ward.